DISTRIKAN’I MOROMBE : Roa lahy mpandroaka sarety novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Tamin’ny fomba feno herisetra tanteraka no noentina nanaperana ny ain’ireto roa lahy izay samy vao erotrerony. Tany amin’ny Nosy-Ambositra ao anatin’ny Distrikan’i Morombe no nisehoan’izany, ny sabotsy lasa teo. 8 mai 2017
Nandroaka sarety avy nanatitra entana izy ireo no nifanehitra tamina andian-jiolahy teny an-dalana rehefa nitodi-doha hiverina hody. Andian-jiolahy maro nirongo basy sy zava-maranitra no avy hatrany dia nanao be fiavy sy nanakana ireto lasibatra. Ny an’ireto farany tanam-polo no mbola tratran’ny be noho ny vitsy ihany koa ka tsy afaka nanao na inona na inona.
Anisany tena notetehin’ireo olon-dratsy tamin’io ny vola teny amin’izy roa lahy miampy ny ombin-tsaretiny. Na izany aza anefa dia niezaka nanohitra an’ireto jiolahy hatramin’ny farany ihany izy roa lahy, ka teo no nahatonga ny habibiana. Nanaovan’ireo olon-dratsy tambabe izy roa lahy, rehefa lavo tamin’ny tany tsy nahatsiaro sy tsy afaka nanohitra intsony ka notrobatrobaran’ireo olon-dratsy ny zava-maranitra ny kibony. Maty tsy tra-drano ireto farany, najifa avokoa ny zavatra rehetra teny aminy niaraka tamin’ny ombin-tsarety.
Tamina toera-mangina somary mihataka ny tanàna no nanaovan’ireo jiolahy io asa ratsy. Olona sendra nandalo avy eo no nahita ny razana nihosin-drà teo amoron-dalana. Izy ireo no niantso ny manodidina, nampandrenesina niaraka tamin’izay ihany koa ny Zandary. Voalaza fa mandry andriran’antsy tanteraka ny mponina any an-
toerana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana miseho lany izay matetika no arahina vono olona mahatsiravina tahaka izao.
Nisy ny fikarohana natao saingy mbola tsy fantatra ireo nahavanon-doza hatreto.